विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन भाडा दर र उडान तालिका तय, कुन देशबाट कहिले उडान ? – OMKARTIMES
विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन भाडा दर र उडान तालिका तय, कुन देशबाट कहिले उडान ?
काठमाडौं- सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा उद्दार गर्ने काम शुरु गरिसकेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि समस्यामा परेका नेपाली प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउन सरकारले उडान तालिका र भाडादर निर्धारण गरेको छ ।
पहिलो चरणको प्राथमिकतामा परेका ३० देशका २४ हजार १४८ नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तालिका तयार पारेर कोभिड १९ व्यवस्थापन केन्द्र सिसीएमसीलाई बुझाएको छ ।
सरकारले नेपालीहरुलाई विदेशबाट फर्काउन नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सका जहाज पठाउने भएको छ भने केही विदेशी एयरलाइन्सलाई उडानमा प्रयोग गर्ने जनाइएको छ ।
कुन देशबाट कहिले उडान हुन ?
पर्यटन मन्त्रालयले उडान तालिका र भाडादर बुझाए पनि कति मान्छे ती उडानबाट नेपाल आउँछन् भनेर सिसीएमसीले हिसाब गर्ने जनाइएको छ ।